SomaliTalk.com » 2012 » October » 24
Home » Archive Maalinta October 24th, 2012
Ciidamada Kenya ee dhawaan soo galey Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay fariisin ka dhigteen Jaamacadda Magaalada Kismaayo oo ku taala Dacalka Magaalada taasoo ay wax ka baran jireen Boqolaal Ardey,Ciidamada Kenya ayaa Jaamacadda gudaheeda ka samaystay Fariisn Ciidan ama Dhufeys iyagoona Isticmaalayay Dhismaha Jaamacaddaas oo ahayd mid si gaar ah loo leeyahay. Degitaankii Ciidamada...
Wasiirka Arimaha Dibada ee Talyaaniga oo Muqdisho Kulan kula qaatey Madxweyne Xasan
Wafdi ballaaran oo uu Hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka talyaaniga ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho.Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Talyaaniga ayaa markii uu yimid Magaalada Muqdishu wuxuu xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Muqdisho wada hadal kula yeeshay Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Singior Julio Tezi iyo Madaxweyne xasan Sh. Maxamud ayaa ka wada hadlay Xiriirka...
W/Q: Mubarak Mohamud Saleban (Mubarak Hadi) – Ummamka dunida ka jiraa xoogoodu wuxuu ku dhisanyahay midnimadoodu inta ay le’egtahay, sidaa daraadeed baa waxaa la yiraahdaa, midnimadu waa waxa ay ummaduhu ku gaaraan meesha sare ee sharafta leh. Waa waxa ay dantooda ku gaari karaan. Waa waxa keena iney bulsho noolaato iyadoo deggan oo xasiloon. Waa waxa keena ummadi ineey noqoto dad laga cabsado,...